कुलप्रसाद न्यौपाने ‘सन्तोष’ महासचिव - नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ (एनटीभीए)
कुलप्रसाद न्यौपाने ‘सन्तोष’ नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ (एनटीभीए)का नवनिर्वाचित महासचिव हुनुहुन्छ । अघिल्लो कार्यकालमा संघका पूर्वसदस्यसमेत रहनुभएका सन्तोष विगत एकदशक भन्दा लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यटक यातायात क्षेत्रमा आवद्ध हुनुहुन्छ । राजधानीमा टुर एक्स्प्रेस नामक पर्यटक यातायात कम्पनी खोलेर पर्यटकहरुलाई गुणस्तरिय यातायात सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएका उहाँ एक जुझारु युवा पर्यटन व्यवसायीसमेत हुनुहुन्छ । आफ्नो कार्यकालमा पर्यटक यातायातमा देखिएका अधिकांश समस्याहरु निरुपण गर्ने सन्तोषको अठोट छ । प्रस्तुत छ, उनै सन्तोषसँग नेपालमा पर्यटक यातायातको अवस्थालगायतका विषयको सेरोफेरोमा रहेर गन्तब्य नेपाल न्यूजका लागि सुवास भट्टले गरेको कुराकानी :
पर्यटक यातायात व्यवसाय कस्तो व्यवसाय हो ?
नेपाल घुम्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवतजावत गर्नका लागि उच्चस्तरको सवारी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवसाय पर्यटक यातायात व्यवसाय हो । र, नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघले नेपालका विभिन्न ठाउँहरुमा घुम्न चाहने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई दक्ष जनशक्तिहरुबाट पर्यटककै इच्छाबमोजिम सुविधासम्पन्न सवारी सेवा उपलब्ध गराउँछ ।
नेपालमा हाल पर्यटक यातायातको अवस्था कस्तो छ ?
नेपाल यस्तो मुलुक हो, जहाँ अहिलेसम्म एउटै पनि मोटर निर्माता कम्पनी छैन् । दुई सय ४७ प्वाईन्ट पाँच प्रतिशत भन्सार, अन्तशूल्कका अतिरिक्त १३ प्रतिशत भ्याट तिरेर हामीले सवारी खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै महंगा र सुविधासम्पन्न सवारी साधनहरु महंगो भन्सार दरमा खरिद गर्नुपर्दा अहिले बैँकको ब्याजदर र किस्ता बुझाउन एकदमै कठिन भैरहेको छ ।
तर, यसका लागि सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन् ।
पछिल्लो समय २०६८ सालमा पर्यटक यातायात कार्यविधि आए पनि त्यस्को स्पस्ट कार्यन्वयन हुन सकेको छैन् । एनटीभिएमार्फत जमर्को गरेर हामीले उक्त कार्यविधि ल्याईसकेपछि पर्यटक यातायातको क्षेत्रमा केही सुधारका कामहरु भएका छन्, तर यो प्रयाप्त छैन् ।
तर, अब मुलुकमा संविधान जारी भैसकेपछि पर्यटक यातायात क्षेत्रमा पनि सुधार हुनेछ भन्ने हामीलाई आशा छ । यसले हामी पर्यटक यातायात व्यवसायीहरुलाई पनि राहत मिल्नेछ भन्ने हाम्रो आशा छ ।
पर्यटक यातायात क्षेत्रमा अहिले सन्तोष गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
तत्कालिन रुपमा हेर्दा पर्यटक यातायात केही सुधारोन्मूख देखिन्छ । यद्यपी, तपाइँले भनेजस्तो सन्तुष्ट हुने अवस्था भने छैन् ।
उसो भए क–कस्ता चुनौतीहरु छन् त पर्यटक यातायात क्षेत्रमा ?
पर्यटक यातायात क्षेत्रका चुनौती भनेको, जस्तो मैले माथी नै पनि उल्लेख गरेँ, नेपालमा मोटर निर्माता कम्पनीहरु नहुनु, बाहिरबाट आयात गर्दा पनि चर्को भन्सार शूल्क र अन्तशूल्क तिर्नुपर्ने अवस्था, सरकारले स्पस्ट नीति र कानुन नबनाउनु÷कार्यन्वयन नगर्नुदेखि बन्द हडताल र पूर्वधारको अभाव नेपालको पर्यटक यातायातका चुनौतीहरु हुन् । त्यस्तै अर्को पक्ष, अहिले पर्यटक आगमन घटेकोले पनि पर्यटक यातायातमा समस्याहरु देखिएका छन्, पर्यटक आगमन बढदा पनि केही हदसम्म हामीहरुको समस्या समाधान हुन्छन् ।
पर्यटक यातायातको एउटा संगठन एनटीभिए छ, तपाइँ यसको नवनिर्वाचित महासचिव पनि हुनुहुन्छ, यो संगठन के गर्दैछ र आगामी योजना के छन् ?
पहिलो त पर्यटक यातायातमा साना भेहिकलहरु, जस्तोः हलुका कार, जिप, भ्यानलगायत डिजेलबाट चल्ने यातायातहरुलाई अहिले पर्यटन मन्त्रालयले प्रदुषणको कारण देखाएर पर्यटक यातायातको मान्यता दिएको छैन् । अहिले युरो थ्री, फोर मापदण्डको सवारीहरु आईसकेका छन् । यिनीहरु प्रदुषण, ध्वनीप्रुफ छन् भनेर हामीले पर्यटक यातायातको मान्यता दिलाउन प्रयास गरिरहेका छौँ । त्यस्तै हामीले यातायात कार्यविधिलाई संसोधन गरेर साना सवारीलाई फस्ट पर्यटकीय गाडीमा रुपान्तरण गर्ने चेष्टा पनि गरिरहेका छौँ किनकी अहिले एकल पर्यटकहरुको संख्या बढदो छ । दोस्रो, पर्यटक यातायातमा बैँङ्किङ, फाइनान्सिङका कुराहरु त्यति सहज छैन्, यसका लागि हामीले दुई÷तिनवटा कोअप्रेक्टिभहरुसँग तिनलाई गाभेर माईक्रो फाइनान्स बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ । तेस्रो कुरा, नेपालमा बन्द हडताल हुने भएकाले हामीले पर्यटक यातायात कल्याणकारी पेट्रोलपम्पको अवधारणा राखेर यसको लाईसेन्सका लागि मन्त्रालयमा प्रकृया अगाडी बढाई राखेका छौँ, यो प्रकृयालाई पूर्णता दिएर नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा पर्यटन यातायात कल्याणकारी पेट्रोल पम्प स्थापना गर्ने गरी हामी अगाडी बढेका छौँ । चौथो, पर्यटक यातायातमा आवद्ध तीन सय ५० जना चालकलाई अभिमूखिकरण तालिम दिएका थियौँ । अब, सम्पूर्ण १५ सय दुई हजार जति चालकलाई तालिम, छुट्टै ड्रेस कोडसहित जिम्मेवार बनाउनका लागि कामहरु भईरहेका छन् । यी कामहरु हाम्रो कार्यकालमा पुरा गर्नेगरी अगाडी बढेका छौँ ।
अहिले पर्यटक यातायातको संख्या र यसमा आवद्ध जनशत्तिको संख्या कति छ ?
एनटीभिएमा अहिलेसम्म ८० जति भेहिकल कम्पनीहरु दर्ता छन् । तर, यसमा दर्ता नभएका कम्पनी र व्यवसायीहरु पनि निकै धेरै हुनुहुन्छ, यसको समग्र ‘डिटेल’ मसँग अहिले छैन् । तर, पछिल्लोपटक कार्यविधि आईसकेपछि हामीले पर्यटन विभागसँग इजाजत लिएर काम सुरु ग¥यौँ, दर्ता हुन बाँकी भेहिकलहरु संस्थाको दायरामा आउनुपर्छ, लाईसेन्स नलिनेहरुलाई भोली विभागले कारवाही गर्छ । काठमाडौँमामात्र डेढ सयभन्दा बढी पर्यटक यातायात व्यवसायीहरु हुनुहुन्छ । देशैभरीको हिसाव गर्ने हो भने त दश हजारभन्दा बढी छन् । यी सबैलाई संस्थाको दायरामा ल्याउने छौँ ।
एनटीभिए अहिलेसम्म काठमाडौँमामात्र सिमित छ । छिट्टै नै एनटीभिए पोखरा हुँदैछ । आगामी दिनमा मुलुकभर यसका च्याप्टरहरु खोल्ने क्रममा छौँ ।
पर्यटक यातायात व्यवस्थापनका लागि सरकारबाट के/कस्ता सहयोग पाउनुभएको छ ?
साना र हलुका सवारीहरुका लागि अहिलेसम्म पर्यटक यातायातको मान्यता दिईएको छैन् । नेपालमा ‘इन्डिभिजुअल’ पर्यटकहरु धेरै आउने भएकाले सबैभन्दा पहिले कार, जिप, भ्यानहरुलाई पर्यटक यातायातको मान्यता दिनुपर्छ । दोस्रो कुरा, हामी पर्यटक यातायात सञ्चालन गर्ने भनेर इजाजत लिएर काम गरेका छौँ, तर यहाँ ट्राभल, ट्रेकिङहरुले पनि पर्यटक यातायात चलाईरहेका छन, यदि उनिहरुले पनि भेहिकल व्यवसाय गर्ने भए इजाजत लिनुप¥यो । त्यस्तै इजाजत नलिईकनै यातायात चलाउने यहाँ धेरै छन्, यी सबैलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । यसका लागि निश्चित मापदण्ड र नियम बनाएर व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । सरकारले यी कुराहरुमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
एनटीभिएले पनि त पर्यटक यातायातलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन खास काम गरेको देखिन्न नि ?
एनटीभिए वि.सं. २०६० सालमा दर्ता भएदेखि नै हामीले पर्यटक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्दै आएका छौँ । सुरुवाती क्षणमा पर्यटक यातायात एकदमै अव्यवस्थित थियो । बिनादर्ता नै कम्पनीहरु सञ्चालन हुन्थे । आजसम्म पनि फोनबाट गाडी चलाएर कमिसन खाने प्रचलन छ, यो ट्रेन्डलाई नै व्यवस्थित गर्न समय लाग्यो । नेपालमा पर्यटक यातायातलाई उद्योगको मान्यता दिनमात्र हामीलाई आठ वर्ष लाग्यो । काठमाडौँमा नै इजाजतलाई व्यवस्थित कार्यन्वयन गराउन पर्यटन विभाग र पर्यटक प्रहरीसँग समन्वय गरेर अनुगमनका लागि छलफल भैरहेको छ । राजधानीमा नै पर्यटक यातायातको व्यवस्थापनका लागि पार्किङको निकै ठूलो समस्या छ । यसबाहेक यावत् समस्या समाधानका लागि हामी प्रयासरत् छौँ ।
नेपालको पर्यटक यातायातका समस्या कति समयमा समाधान हुन्छ होला ?
एनटीभिएमा अहिले नमुना कार्यसमिति आएको छ । हामी एकदमै सक्रिय साथीहरु त्यहाँ आएका छौँ, यस्तो जुझारु कार्यसमिति यसभन्दा पहिले आएको थिएन् । पर्यटक यातायातको विद्यमान ९० प्रतिशत समस्याहरु समाधान गर्नेगरी योजना बनाएर अगाडी बढेका छौँ । यसका लागि स्पस्ट नीति ल्याउने र तिनको हुवहु कार्यन्वयन गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । हामी व्यवसायीहरु पनि गम्भिर हुनु जरुरी छ ।